अब शिक्षक हुनलाई २०० पूर्णांकको परिक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने ! - Dainikee News::
अब शिक्षक हुनलाई २०० पूर्णांकको परिक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने !
काठमाडौँ, जेठ ३ । शिक्षक सेवा आयोगले दुई सय पूर्णांकको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्थायी शिक्षक बन्न एक सय पूर्णांकको परीक्षा पास गरे पुग्ने प्रावधान रहेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोगको नियमावली संशोधन गरेर दुई सय पूर्णांकको परीक्षा व्यवस्था गर्न लागेको हो । संशोधनको मस्यौदामा सयरसय पूर्णांकको परीक्षा दुई चरणमा गर्ने उल्लेख छ । ‘लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न विभिन्न चरणमा सयभन्दा धेरै पूर्णांकको परीक्षा लिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘शिक्षकका लागि पनि दुई सय पूर्णांकको परीक्षा दुई चरणमा गर्न लागिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद्बाटउक्त नियमावली पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नियमावली संशोधनमा स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रावधान पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले स्थायी शिक्षकको बढुवालगायत आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले स्थानीय शिक्षा विभागमार्फत नै शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । विभागले गरेको आन्तरिक मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुँदै आयोगसम्म आइपुग्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संशोधनको प्रावधानबारे छलफल चलिरहेको जनाए । शिक्षक परीक्षाको पूर्णांक वृद्धि गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग राय संकलन गरिरहेको पनि उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ ३, २०७६ /Friday, May 17th, 2019, 8:39 am
आयोगले संशोधन गर्यो अन्तवार्ताको मिति (तालिका सहित)
आइतबार धादिङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)